The Ab Presents Nepal » बंगलादेशी प्रधानमन्त्रीले यसो भने पछि भारतमा खैलाबैला, भारतीय मिडिया फेरी रुवाबासी !
बंगलादेशी प्रधानमन्त्रीले यसो भने पछि भारतमा खैलाबैला, भारतीय मिडिया फेरी रुवाबासी !
काठमाडौं-: बंगलादेशलाई आफ्नो नजिकको सहयोगी सम्झिने भारतको सम्बन्ध पछिल्लो समय बंगलादेशसँग पनि बिग्रिँदै गएको छ । अहिले भारतको सम्बनध छिमेकी देशहरु नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बंगलादेश कसैसँग पनि राम्रो छैन । अघिल्लो वर्षसम्म भारतको सम्बन्ध नेपाल र बंगलादेशसँग सुमधुर थियो तर नेपालसँग सीमा अतिक्रमणको विषय र बंगलादेशसँग नागरिकता कानुनको विषयले सम्बन्ध बिग्रिएको छ ।
भारतको आपत्तिलाई बेवास्ता गर्दै बंगलादेशले बेइजिङ अर्बन कन्स्ट्रक्सन ग्रुपलाई सिलेटको ओस्मानिया विमानस्थलको टर्मिनल बनाउने ठेक्का दिएको छ । सिलेट भारतको उत्तर पूर्वी सीमा नजिकै भएकोले यो क्षेत्र भारतको लागि संवेदनशील छ’। उता चीनले पनि बंगलादेशी उत्पादनमा कर छुट दिएको छ । चीनले बंगलादेशलाई कोरोना महामारीसँग जुध्न मेडिकल सहयोग पनि गरिरहेको छ । चीन र बंगलादेशको यो निकटता भारतको लागि चिन्ताको विषय बनेको छ किनकि बंगलादेश चीनको महत्वाकांक्षी बेल्ट एण्ड रोड परियोजनामा पनि सहभागी छ’।
उता पाकिस्तानसँग पनि बंगलादेशको निकटता बढ्दै गएको छ । कुनै समयका कट्टर दुश्मन देशबीचको यो निकटताले भारतलाई चिन्तामा पारेको छ । हालै पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले बंगलादेश प्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई फोन गरेका थिए । फोन वार्तामा के–के कुरा भयो भन्ने खुलासा नभए पनि यो वार्ता हुनु नै भारतमा तरंग ल्याउनको लागि पर्याप्त थियो’।
रिपोर्टका अनुसार शेख हसिनाको सरकारमा एक समूह चीनसँग सम्बन्ध बलियो बनाउन इच्छुक छ । विगत १० महिनामा पाकिस्तानसँग पनि सम्बन्ध सुमधुर बनाउने प्रयास भइरहेको छ किनकि पाकिस्तान चीनको सहयोगी हो । नोभेम्बर २०१९ मा प्याजको मूल्य उच्च भएर अभाव हुँदा भारतले निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि बंगलादेशले पाकिस्तानबाट प्याज मगाएको थियो । बंगलादेशले पाकिस्तानबाट कुनै कृषि उत्पादन आयात गरेको यो १५ वर्षमा पहिलो पटक थियो । अर्कोतर्फ पछिल्लो समय भारत सरकारले ल्याएको नागरिकता कानुनका कारण भारत र बंगलादेशको सम्बन्ध बिग्रिएको छ’।